Dalí sy ny fanontana ny 150 taona an'i Alice in Wonderland | Famoronana an-tserasera
Tamin'ny 60 tany ho any dia nifandray taminy ny Random House mpanao hosodoko sureista Salvador Dalí hanao andiam-panazavana ho an'i Alice ao Wonderland. Amin'ireo kopia ireo dia nisy faran'izay voafetra izay nosoniavin'i Dalí tenany mihitsy ary nahazo mpanangom-bokatra hametraka an'io fanontana io izy, nasehon'ilay fahaizan'ny surealista ho ivon'ny fitambaran'izy ireo manokana.
Izy io dia ho an'ny fanontana faha-150 taonan'ny Alice in Wonderland izay Kanton'i Dalí Azo alaina ao amin'ny Amazon sy ny fanontana natomboky ny Princeton University Press. Fotoana miavaka iray manokana eo am-pelatananao ny tantara tany am-boalohany indrindra, hafahafa ary manaitra ny zava-drehetra nosoratana, ary afaka mifaly amin'ny alàlan'ny sary mampiseho ny aviavin'ny surealisme aza ianao.
Ny fanontana deluxe an'ny Alice in Wonderland dia miavaka amin'ny fampidirana izay manazava ny fifandraisana misy eo amin'i Dali sy Carrol avy amin'i Mark Burstein, filohan'ny Fikambanana Lewis Carroll any Amerika Avaratra, sy ny fikarohana nataon'ny matematika Thomas Banchoff ny matematika hita ao amin'ny sanganasa sy ny sarin'ny asan'i Dalí.
Ity boky ity dia fialamboly sary feno mahalala lafiny iray hafa amin'ny genius ny hosodoko surealista izay ahitantsika fa manalavitra azy avy amin'ny lafiriny photorealistic kokoa hiatrika sary izay tempera, ranomainty mainty ary fomba hafa mihitsy, izay misy loko fisaka amin'ireo tarehimarika ary manasa amin'ny fomba fijery tsy azo atao.
Ny fahalemen'ny tempera an'i Dalí dia mahatratra a maranitra lehibe mifanohitra tarehimarika amin'ny ranomainty ary maneho fomba vaovao amin'ny zavakantony. Raha te hisafidy ny fividianana an'ity fanontana mahafinaritra ity ianao dia aza adino ny fotoana nifanaovana ary mijanona kely avy amin'ity rohy ity izay hitondra anao mivantana any Dalí sy Alice ao Wonderland.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Dalí manatrika ny fanontana faha 150 taonan'ny Alice in Wonderland